बेवसाईट वेच्ने हो ? मेरो किनिदिनुस् न | मेरो कलम
– विश्वभर ६ सय ४९ मिलियन बेवसाईट (डोमेन) दर्ता भईसकेको छ । बेवसाईट सम्वन्धी विशेष खोज गर्ने साईट नेट क्राफ्टका अनुसार गएको अप्रिल सन् २०१३ मा गरिएको पछिल्लो अनुसन्धानमा सो तथ्याकं वाहिर आएको थियो । सन् २०१२ मा मात्रै २७ मिलियन बेवसाईट दर्ता भएको थियो । यो भनेको ४ प्रतिशतले सो वर्षमा बेवसाईट दर्ता दर बढी हो । पछिल्लो वर्षको बेवसाईट दर्तालाई आधार मान्ने हो भनेपनी अहिल्य दैनिक १० हजारभन्दा वढी डोमेन दर्ता भईरहेको छ । एक-दुई सय हैन, हजार हैन, दशौ हजार डोमेन दर्ता भईरहेको छ । अचम्म छैन त । अनि के तपाईले खोजेको नामको डोमेन पाईरहनुभएको त छ ?
खोजेको र रोजेको डोमेन पाउन त दशौ वर्ष पहिल्यै जन्मेर रजिष्ट्रर गरिहाल्नुपथ्र्यो, अनि मात्र सम्भव थियो भनेर भन्दा फरक नपर्ला । 🙂 समग्रमा वुझ्दा खोजेको डोमेन पाईदैन र छैन । आकर्षण अग्रेजी नामको डोमेन पाउनु भनेको आश्चर्यकै कुरा हो, हुदा हुदाँ नेपाली नामकै डोमेन पाईदैन ।
बेवसाईट सञ्चालन वढ्दो मात्रामा छन् भने डोमेन ओगटेर राख्ने प्रचलन नेपालमा पनी उत्तिकै वढेको छ । छोटा र अर्थपुर्ण (क्याची) नामको डोमेन पाईदैन । कसैगरी लिनै परो भने सेकेण्ड ह्याण्डवाट लिनुपर्ने हुन्छ । अर्थात जतिमा पाउनुपर्ने हो त्यो भन्दा धेरै वढी पैसा तिरेर डोमेन लिनुपर्ने हुन्छ ।
पैसा वरु अलि वढी नै खर्चेर भनेपनी मन परेको डोमेन लिन पाएहुन्थ्यो भन्नु हुन्छ भने यसो गर्नुस् । फ्लिपा डटकम लग ईन गर्नुस् । यो खरिद विक्रिको लागी मध्यस्तकर्ताको भुमिका खेल्ने बेवसाईट हो ।
बेवसाईट खरिद गर्न मात्रै हैन विक्रि पनी यहि वाट गर्न सक्नुहुन्छ । राम्रो नामको डोमेन छ भने राम्रो पैसा पनी पाउनु हुनेछ । यहाँ विश्वभरका मानिसहरु डोमेन खोजी र विक्रि गरिरहेका हुन्छन् । यो साईटवाट हालसम्म १० करोड अमेरिकन डलर भन्दा वढीको बेवसाईट किनवेचको कारोबार भईसकेको छ । तपाई चै बेवसाईट वेच्ने कि किन्ने ? सो बेवसाईटसम्म पुग्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।
‘मोबाईलदेखी मोबाईलसम्म विश्वभर सित्तैमा फोन गरौ’
Nepali May 15, 2013